१. वांछित विशेषता विरुद्ध अवांछित विशेषता
२. स्वभाव दोष तथा गुणको विश्लेषण गर्ने
३. केहि अपवाद
पहिलको ट्युटोरियलमा हामीले हेर्यौं कि अधिकतर व्यक्तिमा बीस देखि तीस प्रमुख गुणहरुले कसरी उनको मुख्य स्वभाव बनाउँछ ।
यस विशेषतालार्इ दुर्इ श्रेणिमा बाड्न सकिन्छ :
१. वांछित (सद्गुण) विशेषता : जस्तै परिश्रम गर्ने, ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठता
२. अवांछित (अवगुण, दोष) विशेषता : जस्तै झूठ बोल्ने, हठ गर्ने
वांछित विशेषतालार्इ सद्गुण भन्दछ अनि अवांछित विशेषतालार्इ स्वभावदोष । विशेषतालार्इ यी दुर्इ वर्गमा बाडिएको छ । सद्गुणबाट कुशलक्षेम आउँछ अनि यसले व्यक्ति तथा उनको पररस्पर सम्बन्धमा पूर्णतः सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । अर्कोतर्फ जसमा दोष हुन्छ, उनलार्इ तथा उनीसँग सम्बन्धितलार्इ मानसिक कष्ट हुन्छ ।
एक अध्ययनले भन्छ कि अंग्रेजी भाषामा लगभग अठारह हजार शब्द छन्, जुन व्यवहारको विविध रूपलार्इ दर्शाउदछ । त्यस मध्य हामीले १०० सामान्य मुख्य दुर्गुणों (प्रकार १) को चयन गर्यौं अनि त्यहिसँग सम्बन्धित १०० सद्गुणका (प्रकार २) को चयन गर्यौं । हाम्रो स्वभावदोष निर्मूलन खण्डमा तपार्इले यो सूची पाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपार्इ आफ्नो विश्लेषण स्वयं गर्न सक्नुहुन्छ । सामान्यतः प्रकार १ मा सामान्य दृष्टिकोणले अवांछित विशेषताहरु छन् । जबकि प्रकार २ मा वांछित विशेषताहरु सम्मिलित छन्, उदाहरणको लागि प्रकार १ मा अशिष्टता को लागि सम्बन्धित वांछित विशेषता प्रकार २ मा विनम्रता छ । व्यक्तिको वांछित विशेषताहरु थाहा हुनाले उनको शक्तिको स्रोतको ज्ञान हुन्छ, जसको सहायताले उनी आफ्नो समस्याहरुमा विजय प्राप्त गर्न सम्भव हुन सक्छ । वांछित विशेषताहरु थाहा हुनाले व्यक्ति जुन समस्यामा छ त्यति बेला उनको स्वाभिमान जागृत गर्नमा मद्धत गर्दछ ।
ध्यानमा राख्नको लागि अन्य सूत्र पनि छ, जसले हामीले पहिला उल्लेख गरेको कुरालार्इ कमजोर पार्दैन । प्रत्येक व्यक्तिको सन्दर्भमा विशेषता वांछित छ अथवा अवांछित, यो भिन्न हुन सक्छ, जस्तै आज्ञाकारिता, विनम्रता, उग्र नहुने इत्यादि एउटा सेवकको लागि वांछित विशेषता हुन सक्छ; तर यदि कोहि कुनै कम्पनीको मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हो, भने यो गुण उसको लागि अवांछित विशेषता बुझ्न सक्छौं । अधिकतर व्यक्तिको लागि शंकालु वृत्ति एक अवांछित विशेषता हुन सक्छ; तर अपराधिक विभागमा जोडिएको अधिकारीको लागि यो वांछित विशेषता हुन जान्छ ।